Degmada Towfiiq oo loo dhagax dhigay saldhig boolis, suuq iyo xaruunta dowladda hoose (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2013 4:17 b 0
Towfiiq, October 21, 2013 – Dowladda Puntland ayaa mashaariic kala duwan ka bilowday degmada Towfiiq ee gobolka Mudug, degmadaas oo dhowaan ku soo biirtay degmooyinka cusub ee maamulka Puntland.
Wasiiru-dowlaha amniga iyo DDR-ta Puntland Cabdulaahi Jaamac cali ayaa maanta dhagax dhigay mashaariic kala duwan oo degmadu yeelanayso, isagoo sheegay in ay jiraan balanqaadyo kale oo maamulku u sameeyey degmada.
Cabdulaahi Jaamac oo daljir la hadlay waxaa uu sheegay in ay dhagax dhigeen saldhig boolis, suuq cusub iyo xaruunta dowladda hoose ee degmada, kuwaas oo haatanba la bilaabayo dardar gelinta dhismahooda.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in degmadu balanqaadyo ka haysato madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole oo sheegay in ceel riig ah loo qodayo degmada Towfiiq ee barriga gobolka ku taala.
Dhegeyso: Jamaal faarax oo daljir ka tirsan ayaa waraystay wasiiru-dowlaha amniga Puntland